Buy 3Stories For Rent (ID-1173) (95Lks) in Mayangone on ipivi.com
3Stories For Rent (ID-1173)
Views: 164 (+1)
Three stories house for rent in Mayangone Township , near Parami Road. Land area - 10000 sqft. House has Living-room, Five Master Bed-rooms, Five Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. 13 air-conditioners are already included.
Asking Price - 7000 USD (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းအနီးရှိ ငှားရန်ရှိသော သုံးထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ်-၁၀၀၀၀စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် ငါးခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် ငါးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် ၁၃လုံး အသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်၏လစဉ်ငှားရမ်းခ - ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
For Sale Aung Zaya (6)Street Thu...
Name: 3Stories For Rent (ID-1173)